HS:-Xoogaga Hiiraan ee Shabaab ka saaray magaalada Belet Weyn oo dhawaantane
Posted by admin on January 13 2012 10:46:33
HS:-Xoogaga Hiiraan ee Shabaab ka saaray magaalada Belet Weyn oo dhawaantan loogu....wararka maanta Jan,13/2012
HS:-Qaar ka mid ah jaaliyada reer Hiiraan ee ku nool qurbaha kaalin wax ku ool ahne horey uga qaatay mashaariic badan oo laga fuliyey Hiiraan ayaa lagu wadaa iney xoogaga Hiiraan ee Shabaab ka saaray magaalada Belet Weyn ka saacidaan wax yabaha ay u baahan yahiin ciidanka.
Ciidanka oo aad u badan waxey u baahan yahiin kaalmo dhinackasta leh iyagoo intooda badan ku sugan duleedka magaalada Belet Weyne iyadoo ay tani u noqoneyso dhiiragelin aad u weyn marba hadii ay arkaan inba loo ogyahay iney yahiin geesiyaal u babac dhigay argagixiso Belet weyne Ilaa Afganistan daadsaneyd.
Marka laga soo tago dadaaladan ciidankawax loogu qabanayo, hadane waxaa dhalinyarada qaarkood laga dareemayaa xiliyada habeenkii in aysan qaarkood heysan wax ay ka hugsadaan qaboowka iyagoona dhawrkii sano ee ina dhaaftay marxaladaas ku soo jiray Hiiraana sidaas kaka xoreeyey argagixisadii ayey tiri Maryan oo reer Belet weyne ah.
Dhalinyarada ayaa qaarkood waxey habeenkii hugsadaan macawisyo halka aysanba qarkoodna seexanba xiliga habeenkii oo ay waardiyo ku jiraan, halka qaarkoodna ay wadaagaan waxiiba ay heli karaan. laakinse marka xaalada dhinaca kale laga eego waxaa loo qirsan yahay iney yahiin geesiyaal amaan iyo gabayba mudan iyagoona marka ay qaarkood ku sugan yahiin gudaha magalaada loogu yeero magacyo qur qurux badan shacabkoodana ka hela ixtiraam.
Waxaa laga yabaa mar hadii dumarka Hiiraan qaarkood ay ciidamada u xoolo qalayaan in raguna ciidanka u iibin doonaan waxyaabaha kale ay u baahan yahiin ciidanku maadama ay soo halgameen oo xoriyada maanta taala Belet Weyne ayna ku xoreynayaan Hiiraan inteeda kale ay iyagu sabab u yahiin.
Dhinaca kale nabadgalyada magaalada Belet Weyne ayaa iyadu wali ku jirta amaba mareysa meel wanaagsan waana ilaah mahadii hadii ay dib u bilaawdeen waxkasta sida ganacsiga, schoolada, nadaafada magaalada iyo waliba xoojinta ciidamada Hiiraan oo tiradii ay ahaayeen markii ay magaalada qabteen inteed kale lagu soo daray hada.
Dhinacaas iyo Bulo Burde howluhu sidii la rabay ayey marayaan waxaana dagaalkaas qeyb ka noqon doona rag markii hore Shabaab ahaa hadase ciidanka ka saacidaya waxkasta oo macluumaad ah iyagana loo balan qaaday iney Hiiraan marka la xoreeyo sidey rabaan ugu noolaan karaan, ragaasi oo dagaalka uga qeyb qaadanaya dhinaca macluumaadka oo ka qaalisan xabada la ridayo.
Shabaabkii Hiiraan ku sugnaa intooda badan waxey diyaar u yahiin iney qaataan nabad laakinse marka hore waxaa lagu sifeynayaa saaxiibadooda siiba kuwooda ka soo jeeda degaanada aan Hiiraan aheyn kadibna cafis ayaa loo fidinayaa markey soo gabo gabeeyaan howlaha ay kala shaqeynayaan saraakiisha.
Dhawr maalmood ka hor ayey aheyd markii ay qaar ka mid ah Shabaab ka yimadeen tuulo la yiraahdo Booco iyagoo iska soo xiiray Shaaribka iyo Gerka isla markii ay magaalada soo galeen ee ay doonayeen iney qaraxyo ka fuliyaan waxa ka soo horeeyey warbiixntooda kadibna waa la qabtay sidaasi ayaana dhaqdhaqaaqa ciidanka Shabaab siiba kuwooda aan reer Hiiraanka aheyn loola socdaa, taasi oo aad u adkeyneysa nabadgalyada ka jirta magaalada Belet Weyne.
Inkasta oo ay aad u adagtahay in wax badan laga ogaado howl galka xoogaga Hiiraan iyo saraakiisha hogaamineysa hadane magaalada Bulo Burde waxaa ku wajahan dagaal ka cusul midkii lagu qabtay Belet Weyne iyadoona ay ciidamada xoogaga Hiiraan ay siweyn ula shaqeynayaan shacabka Hiiraan oo lagu soo dhaweynayo tuulokasta oo ay qabtaan.
Sikastaba Xaalada guud ee Shabaab iyo howlgalada ka socda koofurta Soomaaliya ma ahan mid jaanis danbe u siinaya iney shacabka Somaliyeed gacmaha iyo lugaha sidii hore uga jaraan danbi la,aan.